ICancer Horoscope 2021: Lixesha Lakho Lokuchuma - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
ICancer Horoscope 2021: Lixesha Lakho Lokuchuma
I-Cancer horoscope 2021 igcwele kwiimbonakalo zothando oluqinisekileyo kunye neendaba zothando. Ngokuqinisekileyo imiselwe ukuba ibe yimpumelelo kuzo zonke iindawo.
Abantu bomhlaza, uzalwe phakathi kukaJuni 21-Julayi kwaye nantsi into elindelekileyo. Ngo-2021, uya kuzibekela amanqaku amatsha kwaye awusayi koyika ukuqhubela phambili nokuba, ngamanye amaxesha, kuya kufuneka uzinyanzele ukuba uthathe amanyathelo. Oko kwathethileyo, amathamsanqa aya kuba kwicala lakho kwaye aya kukunika isikhokelo kwicala elifanelekileyo. Ngunyaka othandekayo; ububele bakho buya kwandisa abanye kwaye ngokubuyisela, uya kujikelezwa ngabantu abalungileyo kwaye uya kufumana iingcebiso eziluncedo. Ngaphandle kokuqhubela phambili, fumana i-Cancer horoscope 2021 ngu-Astrologist uSusan Taylor.
Umhlaza minyaka le imixholo yehoroscope:
Yintoni egcinelwe unyaka wam?
Kuthekani ngobomi bam bothando?
Kwaye umsebenzi wam?
Njani ngezemali zam?
Ngaba ndiza kuba sempilweni?
Zeziphi iinyanga ezakuba zikhulu kwaye ziya kuba nzima?
I-Cancer horoscope 2021: Umnatha womlingo
Abemi bomhlaza, uyakuba nomnqweno kwaye ube nesimilo, uya kuwenza acace amabhongo akho, kodwa ezinye izinto okanye abantu baya kukunciphisa isantya, kwaye izikali ezithile zamandla ziya kukuphazamisa. Ngethamsanqa, ithamsanqa kunye nokuxhamla kuya kukuvumela ukuba uphinde ufumane ulungelelwaniso kwaye unike ukungaguquguquki kwizicwangciso zakho.
Ngaphandle kokungaqondani okumbalwa kunye neempikiswano, lo nyaka uya kuba ulungile kubudlelwane bakho, nokuba yeyothando, yosapho okanye ubuhlobo. Phakathi kothando ekuboneni kokuqala, umtshato kunye namaxesha omlingo, uya kuba namava enyakeni.
Luya kuba nawuphi umphumo uphawu lokunyuka komhlaza kunyaka wakho?
Enkosi ngokunyuka komhlaza, u-Uranus kunye noNeptune baya kuthi kukukhuthaza ukuba usebenzise oovimba bakho bangaphakathi ukuze ufezekise iinjongo zakho. Ungalindela iindaba ezimnandi kwaye uve uthando kwabo bakungqongileyo xa uziva ungonwabanga.
Umqondiso wakho okhulayo uyadlala indima ebalulekileyo kunyaka wakho. Ziveze ikhalityhuleyitha yethu ekhulayo yomqondiso.
Yintoni injongo yakho ye-2021?
NgokweCancer 2021, uya kukhetha gxila kwixesha elide kuba ayizukufumana iinyawo zakho kuphela kwikhondo lomsebenzi wakho, kodwa uya kuphumelela eluthandweni.
Ukujonga kwangoko kwi-2022
UJupiter kunye neNeptune baya kukunceda uphumelele kwaye ukukhuthaza ukuba ube nobuchule I-Uranus iya kukubonelela ngemiceli mngeni emitsha kwaye awuyi kufutshane kwizimvo okanye izicwangciso.
I-Cancer 2021 yithanda i-horoscope: Cacisa ngeemvakalelo zakho
i-mercury kwimihla yokubhalwa kwakhona kwe-2021
Awuyi kuba luhlobo lokwazi abantu abaninzi abohlukeneyo kuba UPluto uya kukwenza ukhethe xa kufikwa ekukhetheni ukuba ngoobani abahlobo bakho. Oku kuthetha ukuba uyakuba nobuhlobo obunyanisekileyo nabo ubakhethileyo, ngoko ke ngokuqinisekileyo ngekhe usilele ukhathalelo kunye nengqwalaselo kwabanye.
Uthando luya kubakho kuwe ngo-Epreli kwaye ubuhlobo obutsha buya kwenziwa. Nangona kunjalo, Lumka Ukubuyiswa kwakhona kweMercury njengoko izakwenza ubudlelwane bakho bube nzima ngakumbi kwaye inokubangela ukuba utolike gwenxa oko abanye bakuthethileyo okanye bathethe izinto ozisolayo ngazo ngoFebruwari nango-Okthobha.
Emva kwesiqalo esingazinzanga, ukuba nobudlelwane kuya kuza ngokwendalo kuwe kwaye uya kuba nakho ukufumana uthando ngokulula. Kodwa kuyakubakho amaxesha apho unokufumanisa ukuba awukho kubude obulinganayo nabanye abantu kwaye ezinye ubudlelwane bakho ziya kushiywa kancinci ngenxa yoku.
>> Jonga uqikelelo lwakho lwe-2021 lwehoroscope yothando<<
Ingcebiso nge-Astrologist uSusan Taylor ngomhlaza:
'Abahlobo abanomhlaza, xa uwonke uyakugcina ubuhlobo obunempilo, ubudlelwane bakho bokuthandana buya bukhula ngakumbi, kwaye ubudlelwane bakho nabantu osebenza nabo buya kukhula. Nangona kunjalo, khumbula ukubeka iimfuno zakho kuqala '
Umsebenzi weCancer horoscope 2021: Ukunyuka kwileli ukuya empumelelweni
Uya kuthatha umngcipheko ngokwamkela izikhundla ezithile kubomi bakho bobuchwephesha, wenze kakuhle! Kumanqaku, ungafumanisa ukuba awuqhubekeki ngokukhawuleza njengoko ubunethemba, kodwa oku kuyakutshintsha ekugqibeleni. NgeJupiter, uya kuba nakho ukubona kwangaphambili ukubanakho amathuba amahle kwaye alungele indlela yakho.
Ngaphandle kokuba abanye abantu bezama ukukubuza kwaye babangele inkathazo, uya kuhlala ugxile kwaye uphumelele ekuzilungelelaniseni kwakhona ngokwezemali kunye nokulinganisa inkcitho yakho.
>> Fumana uqikelelo lwehoroscope yakho ngo-2021<<
Ihoroscope yezemali ye-2021: Hlala ugxile kwiinjongo zakho
Ngempembelelo yeMercury, ngekhe ube nangxaki yokulinganisa uhlahlo-lwabiwo mali, kwaye usenokuxhamla kukufakwa kwemali okungalindelekanga. Lumka, nangona kunjalo, ukuba unezigqibo ezibalulekileyo zezemali ekufuneka uzenzile; I-Uranus iya kudityaniswa kakubi ukuya embindini wexesha kwaye inokubangela ukunqongophala kokungakhathali okanye ukungxamiseka!
>> Fumana ihoroscope yakho yemali 2021 apha<<
Umhlaza we-horoscope yempilo ka-2021: Musa ukuzityhala kakhulu
Uya kuwuqala unyaka ngehlombe kwaye usempilweni kwaye uya kuzama nika t Umzimba wakho ubume obugqibeleleyo. Ngenxa yoko, uya kuziva ubuthathaka ngoMatshi nango-Epreli. Emva koku, uya kuzama ukuphinda ufumane indlela yokuphila esempilweni kwaye uya kuphila ngalo lonke ixesha.
Inombolo yeengelosi ezili-111 ezinentsingiselo
NgoSeptemba uya kuphuma konke, yiyo loo nto uya kuba sele uziva utyhafile ngokuphela kwenyanga nango-Okthobha; Ngo-Novemba, kwelinye icala, uya kube uphumle wena. Uyakonwabela yonke into kwaye oku kuyakukhulisa isimilo sakho ngoDisemba!
>> Landela izigaba zeLunar kwikhalenda yeNyanga<<
Impembelelo kwiplanethi ngo-2021 kwiCancer
Iiplanethi ze-4 ziya kuba nendima ephambili eziyidlalayo kulo nyaka kwaye ziyakwenza njalo ifuthe kwiimvakalelo zakho nakwizigqibo:
UVenus izokunceda udlale ngothando.
Ijupiter izakuvulela iingcango ngoJuni / Julayi.
Uranus izakuzisa ubuhlobo obutsha.
INeptune iya kukhuthaza ukucinga kwakho kwaye ikukhuthaze ukuba ube nobubele.
Ukuqonda komhlaza minyaka le ngenyanga
Zeziphi iinyanga eziza kuba zezona zilungileyo kunye nezona zimbi kuMhlaza? Fumanisa eyona nyanga inethamsanqa kwisimboli nganye ye-zodiac.
Umhlaza Iinyanga ezingama-2021: Yintoni egcinelwe iCancer?: Ukulinganiswa kweenkwenkwezi:
Ukubhaka ngothando ⭐⭐⭐⭐80%
Uya kuziva ulahlekile ⭐⭐30%
Uthando lubuyile nge-bang ⭐⭐⭐⭐80%
Utshintsho lusendleleni ⭐⭐⭐60%
Akukho mngeni mkhulu kakhulu ⭐⭐⭐60%
I-Cupid inezicwangciso ngawe ⭐⭐⭐⭐70%
Yamkela i-vibes elungileyo ⭐⭐⭐60%
Funda ukukhululeka ⭐⭐30%
Lumkela ukungaqondani ⭐Amashumi amabini%
Ubuyile ukuze uzive kwakhona
Yenza konke okusemandleni akho ukuphepha ingxaki.
Ibinjani i-2020 yoMhlaza?
Nantsi into eyabhengezwa nguSusan Taylor ngomhlaza kwi-2020, sishiya amagqabantshintshi apha ngezantsi kwaye usixelele ukuba uhambe njani unyaka wakho.
Imiceli mngeni yobuchwephesha ikukhokelela kwimimandla emitsha ngo-2020. Ukanti, ubuthandabuza ubudlelwane bakho kwaye wazabalazela ukuzibophelela ngokupheleleyo! Ngo-2020, uye walandela ukuqalisa ngomsebenzi okanye ukuqala komsebenzi omtsha. Ngokwenyani ubonakalisile onke amandla akho!
Isiphelo sikaSusan Taylor kunye neengcinga zokugqibela
Ebuthathaka, uphawu lweenkwenkwezi lomhlaza lukwanokutsha kunye nokuthantamisa. Ndiyabulela kule horoscope yonyaka, ndiyathemba ukuba unokuziqikelela kwaye ulindele iziganeko eziza kuphawula lo nyaka mtsha. Ndiyathemba ukuba uza kuqhubela phambili ngokuzolileyo ebomini kwaye ube nonyaka omuhle. Khumbula, uthando kunye nempumelelo yomsebenzi zisendleleni kuwe; lo gama nje uhlala ujonge kwaye ujonge injongo.
Umhlaza wokuzalwa komntu 2021: Ukulinganiswa konyaka
Umhlaza + iTaurus 85%
Eyona nyanga imbi:
Cofa kwividiyo engezantsi ukuqikelela kukaSusan Taylor ngomhlaza:
I-2021 Horoscope: Cofa kolunye uphawu lwe-zodiac kuqikelelo lwabo lweenkwenkwezi
Iinkcukacha ezingakumbi zeCancer horoscopes:
Kutheni ume apho? Zininzi izinto onokuzifumana malunga nomqondiso wakho:
Iingcebiso eziphezulu kwi njani ukutsala umdlavuza indoda
Fumanisa ukuba yintoni imini eza kuza neyakho I-Cancer horoscope namhlanje
Fumana ulwazi oluthe kratya ngezibakala ezili-15 ezinomdla kwiCancer.
Zeziphi iimpawu ezi-5 ze-zodiac eziya kufumana uthando ngo-2021.
* Umthombo woncwadi: INew International EPHEMERIDES 1900 - 2050, umbhali; UFrancis SANTONI, Ipapashwe ngoJuni 1994 kwaye iyafumaneka apha: IAmazon -I-EPHEMERIDES entsha yamazwe aphesheya ngo-1900 ukuya ku-2050
Kutheni le nto iFlowu yamaGqabi amane ineLucky kangaka? USusan Taylor utyhila konke
Ubuntu bukaLeo: Yonke into Ohlala Uphupha Ukwazi
Uthando lwenombolo ye-1011
uninzi lweempawu eziqhelekileyo zodiacac
inombolo yakho yobomi
pisces indoda ngothando